बसुन्धरा विस्फोट चन्द समूहले नै गराएको आशंका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बसुन्धरा विस्फोट चन्द समूहले नै गराएको आशंका
फाल्गुन २५, २०७५ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले नै विस्फोट गराएको प्रहरीको आशंका छ । घरको भुइँतलामा पार्किङ गरिएको बा१०च ६७८९ नम्बरको गाडीमुनि गराइएको विस्फोटको कसैले जिम्मा नलिए पनि सोही समूहले गराएको हुन सक्ने आधार फेला परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पोस्ट ब्लास्ट इन्भेस्टिगेसन टोलीका एक सदस्यका अनुसार शक्तिशाली विस्फोटमा गाडी जलेर घरमा आगो सल्केको थियो । विस्फोटलगत्तै नेपाली सेनाको एक टोली पुगेको र उसले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको स्रोतले बतायो । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका अनुसार उक्त विस्फोटमा परी सडकमा हिँडिरहेका शैलेन्द्र खडका, छिमेकमा बस्ने मिलन बस्नेत, दिवाकर गुरुङ र ममता गौतम सामान्य घाइते भएका थिए । उपचारपछि उनीहरू शुक्रबार राति नै घर फर्केका छन् ।
गुरुङ गाडी पार्क गरेर घर छिरेको केहीबेरमै विस्फोट भएको थियो । गाडीमा आगो लागेर धूवाँको मुस्लो देखिएको केहीबेरमै प्रहरी पनि घटनास्थल पुगेको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले शनिबारै उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र वृत्त प्रमुखसहित आकस्मिक बैठक डाकेको थियो । बैठकमा चन्द समूहको टार्गेटमा व्यापारिक घराना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायी रहेकाले थप सतर्क रहन डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीले निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार रोहनले आफूसित चन्द समूहले चन्दा मागेको वा धम्की दिएको बारे प्रहरीलाई केही खुलाएका छैनन् ।
विस्फोटलगत्तै उक्त समूहका उपत्यका ब्युरोका नेताहरूमाथि निगरानी बढाउन खोजे पनि प्राविधिक सूचनाको अभावमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको प्रहरीको दाबी छ । घटनास्थलमा सक्रिय मोबाइलहरूको विवरण केलाउन टेलिकम सेवा प्रदायक संस्थाबाट कल डिटेल रेकर्ड झिकाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि अदालतको लिखित अनुमति चाहिन्छ । शनिबार अदालत बिदा भएकाले अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रहरीको दाबी छ । तत्कालै कल डिटेल रेकर्ड चाहिने परिस्थितिमा प्रहरी अधिकारीहरूले अदालतसँग मौखिम अनुमति लिएर भोलिपल्टै मात्रै कागजी प्रक्रिया मिलाउने गरेका छन् । तर बसुन्धरा विस्फोटमा उच्च तहसम्मकै राजनीतिक कनेक्सन हुन सक्ने आकलन गर्दै प्रहरी औपचारिक प्रक्रियाबेगर कल डिटेल रेकर्ड हेर्न हच्किएको स्रोतले जनायो । यस घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले शनिबार अबेरसम्म पनि कल डिटेल पाइसकेको थिएन ।
सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन कर्णाली पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शनिबारै पत्रकारहरूसँग चन्द समूह त्यति ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको दाबी गर्दै विध्वंसात्मक गतिविधि विस्तार हुने आधार नभएको बताएका थिए । उनले त्यसविरुद्ध कठोरताका साथ जाने दाबी गरे पनि उक्त समूहलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण प्रस्ट नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरू अलमलमा देखिन्छन् । विस्फोटका घटनामा पार्टीको केन्द्रीय पंक्तिलाई नै जिम्मेवार ठान्ने कि संलग्नलाई मात्रै भन्नेमा अलमल रहेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'सरकारको प्रस्ट निर्देशन नआएकाले कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकिएको छैन,' उनले भने ।
यसैबीच वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भेलाले विस्फोटको भत्र्सना गर्दै आइतबार सबै म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
'जमिन भुक्लुक्क गरेजस्तो भयो'
मणिराम पोखरेल, घाइते
विस्फोट भएकै घरको एउटा सटरमा मेरो किराना पसल छ । शुक्रबार राति म पसलमै बसिरहेको थिएँ । एक्कासि कानै फुट्लाजस्तो ठूलो आवाज आयो । तत्काल मेरो टाउकोमा ठूलै चीज बजि्रएजस्तो भयो । मलाई त पृथ्वी नै ध्वस्त भएजस्तो लाग्यो । म लडिहालें । मलाई केही गह्रौं चिजले थिचिरहेको थियो । ढलान खसेर थिचेको हो कि ? भूकम्प पो आएको हो कि ? केही मेसो पाइनँ । होस हराएजस्तो भयो । केहीबेरमा होस आएजस्तो पनि भयो ।
मलाई पसलको र्‍याकले थिचेको रहेछ । सिसाले हातमा कताकता काटेछ । म रगताम्य थिएँ । पसल धूवाँले भरिएको थियो । मैले दायाँबायाँ केही देखिनँ । छामछाम छुमछुम गर्दै बाहिर निस्कें । बाहिरको फलामे गेट नै थिएन । छेवैको अर्को कोठामा रहेको गाडीमा आगो बल्दै थियो । यति ठूलो चर्को आवाज मैले जीवनमा कहिल्यै सुनेको थिइनँ । जमिन नै भुक्लुक्क भएजस्तो भएको थियो एकैछिन । कानको जाली फुट्यो होला भन्ने लागेको थियो, धन्न केही भएनछ । सामान्य उपचार गराएर घर फर्कें । तर विस्फोटको आवाजले रातभर निद्रा लागेन । शनिबार बिहान पसल गएर हेर्दा पो थाहा भयो, रिचार्ज कार्डको बन्डल नै हराएछ । पैसा पनि थिएन । सालाखाला ७५ हजार बराबरको नगदै नोक्सान भयो । पसलका धेरै सामान टुटेफुटेका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ २१:३४
राउतसँगको सहमतिप्रति नेता रावलको आपत्ति
काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका नेता भीम रावलले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिको भाषाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले विगतमा राष्ट्र विखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको तर सहमतिपत्रमा ती अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको भन्ने कतै नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
'पहिलो त संगठनको नाम नै स्वतन्त्र मधेस राख्नु गलत छ, दोस्रो सीके राउतले संविधानको मर्मविपरीत गएर राष्ट्र विखण्डन गर्ने विषयलाई पटकपटक उठाउँदै आएका थिए, सहमतिपत्रमा ती अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको उल्लेख छैन,' उनले राजधानीमा शनिबार आयोजित अन्तक्रिर्यामा भने । उनले सहमतिपत्रमा स्वतन्त्र मधेसजस्ता आपत्तिजनक शब्द राखिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे । उनले नेकपाभित्र छलफल नगरी अपारदर्शी ढंगबाट सहमति गएको उल्लेख गर्दै सहमतिले कुनै पनि बेला राष्ट्रलाई आघात पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
'मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाउन विभिन्न संघ/संगठनसँग सहमति गर्नुपर्छ, तर सहमति गर्दा त्यसको निश्चित उद्देश्य हुन्छ, जसबाट राष्ट्रलाई आघात पुग्नु हुँदैन, देशको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु हुँदैन,' उनले भने । पार्टीभित्र गहन छलफल गरेर सहमतिपत्रलाई सच्याउनुपर्ने मागसमेत उनको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ २१:०७